सहमति भए पछि डा. केसीले २८ दिन पछि अनसन तोडे – Nepali news portal
सहमति भए पछि डा. केसीले २८ दिन पछि अनसन तोडे
२५ आश्विन २०७७, आईतवार १४:४४ October 11, 2020 काठमाडौं डेष्क
काठमाण्डौं, चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले आज २८ दिनमा अनसन तोडेका छन् । उनी १९ औं पटक अनशन बसेका छन ।
सरकारसगँ गएराति भएको सहमति पछि उनले शिक्षण अस्पतालका कोरोना मुक्त कर्मचारीको हातबाट जुस खाएर अनसन तोडेका हुन् ।
लामो समयको आमरण अनशनका कारण स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएका डा. केसीको अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ ।
सरकार र डा. केसी पक्ष टोलीबीच शनिबार दिनभर वार्ता हुन नसके पछि देशभर चिकित्सकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । त्यस पछि राति नै वार्ता बसेर ८ बुदे सहमति भएको थियो ।
डा।केसीले ६ बुँदे माग राख्दै आएका िथए ।
विद्युतीय माध्यमबाट राजश्व तिर्दा शुल्क नलाग्ने
आज २०७१ जना संक्रमित थपिए